इलेक्ट्रिक स्कुटरका लागि लाइसेन्स अनिवार्य छ कि छैन ? | शुभयुग
इलेक्ट्रिक स्कुटरका लागि लाइसेन्स अनिवार्य छ कि छैन ?
न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७९ बैशाख १२, सोमबार (४ हफ्ता अघि)
४३८ पाठक संख्या
काठमाण्डौ – पछिल्लो समय नेपालमा पनि विद्युतीय स्कुटरप्रति चासाे बढेकाे छ ।
प्रयाेग र माग बढेसँगै सरकारले विद्युतीय सवारीकाे व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था ल्याउन थालेकाे छ । यसैबीच विद्युतीय स्कुटरका लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) अनिवार्य छ कि छैन भन्ने विषयमा धेरैजना अन्याैलमा रहेकाे पाइएकाे छ ।
यसअघि भित्रिने विद्युतीय स्कुटर साइकलजस्तो हुने गरेकाले सरकारले लाइसेन्स अनिवार्य गरेको थिएन । यही व्यवस्थाका कारण केही चालकमा विद्युतीय स्कुटरका लागि लाइसेन्स चाहिँदैन भन्ने परेकाे हुनसक्छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार सुरुवाती समयमा लाइसेन्स नचाहिने व्यवस्था हुँदा अहिले पनि सोही व्यवस्था रहेकाे बुझाइ धेरैमा छ ।
‘पहिले विद्युतीय स्कुटरका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको थिएन । यहीकारण अहिले पनि लाइसेन्स आवश्यक छैन भन्ने सोचाइ देखिएकाे हाे । तर अहिले विद्युतीय स्कुटरका लागि पनि लाइसेन्स अनिवार्य गरिएकाे छ,’ उनले भने । साथै लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको मातहातमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दर्ता भएका सबै सवारीका लागि लाइसेन्स अनिवार्य छ । तर यो कुरा धेरैले नबुझेका कारण लाइसेन्सलाई बेवास्ता गरिएकाे उनकाे भनाइ छ । हाल विद्युतीय स्कुटर पनि इन्धन स्कुटरलाई जस्तै ‘के’ वर्गमा राखिएको छ । सोही अनुसार सवारी चालकले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्छ ।
विद्युतीय सवारी व्यवस्थापन